လက်ရှိ အလုပ်က ထွက်သင့်တဲ့ လက္ခဏာ (၅)ခု – Gentleman Magazine
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]လက်ရှိ အလုပ်က ထွက်သင့်တဲ့ လက္ခဏာ (၅)ခု
လကျရှိ အလုပျက ထှကျသငျ့တဲ့ လက်ခဏာ (၅)ခု
အလုပျမှာ အဆငျမပွဖွေဈတာတှကေ မဖွဈမနကွေုံတှရေ့မယျ့ကိစ်စဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဆငျမပွမှေုတှေ မြားလာပွီဆိုရငျတော့ ဒီအလုပျက နှုတျထှကျလိုကျသငျ့ပါပွီ။ လူအမြားစုက ဘယျအခြိနျမှာ လကျရှိအလုပျကနေ နှုတျထှကျရမလဲဆိုတာကို မစဉျးစားတတျကွပါဘူး။ တကယျယောင်ျကြားက ဘယျတော့မှ လကျမလြှော့ဘူးလို့ ပွောလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့အတှကျမပြျောရှငျရတော့ဘူးဆိုရငျ နှုတျထှကျဖို့ စဉျးစားသငျ့ပါတယျ။ ဒီတော့ လကျရှိအလုပျက ထှကျသငျ့ပွီးလားဆိုတာကို သိနိုငျမယျ့ လက်ခဏာတှကေို သိထားဖို့ လိုပါတယျ။
၁။ စိတျဖိစီးမှု မြားလှနျးခွငျး
လအနညျးငယျအတှငျးမှာ စိတျဖိစီးစရာမြားတဲ့ နရေ့ကျအနညျးငယျလောကျ ကွုံတှရေ့တာက ပွဿနာမရှိပါဘူး။ ဒီထကျပိုလာပွီး သငျ့အလုပျက သငျ့ရဲ့ဘဝကိုပါ ထိခိုကျလာပွီဆိုရငျတော့ နှုတျထှကျလိုကျတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
၂။ အလုပျက စိနျချေါမှု မရှိခွငျး
တဈနပွေီ့းတဈနေ့၊ တဈလပွီးတဈလ၊ တဈနှဈပွီးတဈနှဈ တဈနရောထဲမှာပဲ လုပျရိုးလုပျစဉျအလုပျတှကေို လုပျဆောငျရငျး စိနျချေါမှုမရှိဘူးဆိုရငျ ဘဝက ဘာမှဖွဈလာမှာမဟုတျပါဘူး။ သငျ့အလုပျမှာ တိုးတကျပွောငျးလဲဖို့ အခှငျ့အလမျးတှကေိုလညျး မြှျောလငျ့လို့ မရဘူးဆိုရငျ ထှကျလိုကျပါ။
၃။ လုပျငနျးက ဦးတညျခကျြမဲ့နခွေငျး
သငျအလုပျလုပျနတေဲ့ လုပျငနျးကိုယျတိုငျက အနာဂတျအစီအစဉျမရှိဘူးဆိုရငျ သငျ့ကို လစာကလှဲပွီး ဘာမှပေးနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။ သငျ့ရဲ့အလုပျကို ငှရေဖို့အပေါကျအလမျးတဈခုလို့ပဲ ဘယျတော့မှ မမွငျပါနဲ့။ လုပျငနျးခှငျတဈခုဆိုတာ စိတျကူးအိပျမကျတှကေို အကောငျအထညျဖျောတဲ့နရောဖွဈပါတယျ။ သငျ့အလုပျလုပျနတေဲ့ လုပျငနျးက သငျ့ရဲ့ရညျမှနျးခကျြတှေ၊ အိပျမကျတှဖွေဈလာအောငျ အထောကျအကူဖွဈနိုငျခမြေရှိဘူးဆိုရငျ အလုပျထှကျဖို့ ဆုံးဖွတျသငျ့ပါတယျ။
၄။ တိုးတကျမှုအလားအလာ မရှိခွငျး
တိုးတကျကွီးပှားဖို့ ရညျမှနျးခကျြက လူတိုငျးအတှကျ အရေးကွီးပါတယျ။ တိုးတကျကွီးပှားလိုစိတျနဲ့ မှေးမှိနျပြောကျကှယျသှားလို့ မဖွဈပါဘူး။ အခုလကျရှိ သငျလုပျနတေဲ့အလုပျမှာ သငျ့အတှကျ ပညာရနိုငျစရာ၊ တိုးတကျလာနိုငျစရာ အလားအလာတှမေရှိတော့ဘူးဆိုရငျ အလုပျထှကျဖို့ စဉျးစားတာက မှနျကနျတဲ့ တှေးချေါမှုဖွဈပါတယျ။
၅။ အလုပျမှာ စိတျမပါခွငျး
အလုပျက စိတျဝငျစားစရာမကောငျးတဲ့အခါမှာ ပငျြးရိမှုတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။ ပိုပွီးဆနျးသဈတဲ့၊ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ အရာတှကေို မလုပျဆောငျရဘူးဆိုရငျ ဘဝက သာမနျထကျထူးခွားလာမှာ မဟုတျပါဘူး။ စိတျမပါပဲ လုပျနတောက သငျကိုယျတိုငျအတှကျရော လုပျငနျးအတှကျပါ အနာဂတျအလားအလာကောငျးစမှော မဟုတျပါဘူး။
အလုပ်မှာ အဆင်မပြေဖြစ်တာတွေက မဖြစ်မနေကြုံတွေ့ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆင်မပြေမှုတွေ များလာပြီဆိုရင်တော့ ဒီအလုပ်က နှုတ်ထွက်လိုက်သင့်ပါပြီ။ လူအများစုက ဘယ်အချိန်မှာ လက်ရှိအလုပ်ကနေ နှုတ်ထွက်ရမလဲဆိုတာကို မစဉ်းစားတတ်ကြပါဘူး။ တကယ်ယောင်္ကျားက ဘယ်တော့မှ လက်မလျှော့ဘူးလို့ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်အတွက်မပျော်ရွှင်ရတော့ဘူးဆိုရင် နှုတ်ထွက်ဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဒီတော့ လက်ရှိအလုပ်က ထွက်သင့်ပြီးလားဆိုတာကို သိနိုင်မယ့် လက္ခဏာတွေကို သိထားဖို့ လိုပါတယ်။
၁။ စိတ်ဖိစီးမှု များလွန်းခြင်း
လအနည်းငယ်အတွင်းမှာ စိတ်ဖိစီးစရာများတဲ့ နေ့ရက်အနည်းငယ်လောက် ကြုံတွေ့ရတာက ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ဒီထက်ပိုလာပြီး သင့်အလုပ်က သင့်ရဲ့ဘ၀ကိုပါ ထိခိုက်လာပြီဆိုရင်တော့ နှုတ်ထွက်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
၂။ အလုပ်က စိန်ခေါ်မှု မရှိခြင်း
တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့၊ တစ်လပြီးတစ်လ၊ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် တစ်နေရာထဲမှာပဲ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အလုပ်တွေကို လုပ်ဆောင်ရင်း စိန်ခေါ်မှုမရှိဘူးဆိုရင် ဘ၀က ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်အလုပ်မှာ တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်း မျှော်လင့်လို့ မရဘူးဆိုရင် ထွက်လိုက်ပါ။
၃။ လုပ်ငန်းက ဦးတည်ချက်မဲ့နေခြင်း
သင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းကိုယ်တိုင်က အနာဂတ်အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုရင် သင့်ကို လစာကလွဲပြီး ဘာမှပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့အလုပ်ကို ငွေရဖို့အပေါက်အလမ်းတစ်ခုလို့ပဲ ဘယ်တော့မှ မမြင်ပါနဲ့။ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဆိုတာ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းက သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေ၊ အိပ်မက်တွေဖြစ်လာအောင် အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ချေမရှိဘူးဆိုရင် အလုပ်ထွက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။
၄။ တိုးတက်မှုအလားအလာ မရှိခြင်း
တိုးတက်ကြီးပွားဖို့ ရည်မှန်းချက်က လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ တိုးတက်ကြီးပွားလိုစိတ်နဲ့ မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ အခုလက်ရှိ သင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာ သင့်အတွက် ပညာရနိုင်စရာ၊ တိုးတက်လာနိုင်စရာ အလားအလာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင် အလုပ်ထွက်ဖို့ စဉ်းစားတာက မှန်ကန်တဲ့ တွေးခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
၅။ အလုပ်မှာ စိတ်မပါခြင်း
အလုပ်က စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းတဲ့အခါမှာ ပျင်းရိမှုတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ပိုပြီးဆန်းသစ်တဲ့၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အရာတွေကို မလုပ်ဆောင်ရဘူးဆိုရင် ဘ၀က သာမန်ထက်ထူးခြားလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်မပါပဲ လုပ်နေတာက သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်ရော လုပ်ငန်းအတွက်ပါ အနာဂတ်အလားအလာကောင်းစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Previous: သင်…. ဘာလို့ မအောင်မြင်သေးတာလဲ ???
Next: သာမန်လူများနှင့် လူချမ်းသာများကို ကွဲပြားခြားနားစေသည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များ